Ciidanka Badda ee Mareykanka ayaa isticmaali doona Linux | Laga soo bilaabo Linux
Sannadkii hore waxaan aragnay sida ciidamada cirka ee Mareykanku waxay go'aansadeen inay adeegsadaan LinuxHagaag hada waa markab badaNavy).
Warku wuu igu soo gaadhayaa FreeSoftwareV, oo si wanaagsan ayaa loo qoray oo waxaan door bidaa inaanan sameysan mid aniga ii gaar ah oo wararka ah, sidaas darteed waxaan uga tagayaa warka si buuxda:
Dhibaatooyin kadib saldhigyada ay gacanta ku hayaan Navy go'aansaday, shaqaaleynta Raytheon, u beddelaan nidaamkooda xakamaynta qalabka anteenada sida diyaaradahooda qumaatiga u kaca. Xulashadaadu waa inaad u guurto Linux.
MQ-8 Fire Scout - isticmaale mustaqbalka ee nidaamyada GNU / Linux
"Qandaraaska dadaallada loo baahan yahay si loo dhammaystiro kala-guurka Linux ee ku saabsan barnaamijka nidaamka xakamaynta xeeladeynta ee tooska looga qaado saldhigyada hawada laga hago ee gaadiidka aan cidi wadin…"
via difaaca.xirfadlayaal | defpro.com.
Iyada oo leh awooda cimilada oo dhan, helikobtarradan ayaa u oggolaanaya "isha saddexaad" inay ka caawiyaan ciidamada badda markab. Waxay leeyihiin dareemayaal koronto, iftiin iyo infrared, radar, laser marker iyo nidaamkooda hubka.
Ku saabsan Wiki Raytheon, qandaraasle lama iloobaan u ah ciidamada qalabka sida ee adduunka badhkiis, wuxuu matalaa caqabad uu u diyaar garoobay. Iyada oo aad la soo wareegtay Teknolojiyada BNN -Shirkadda ugu horreysa ee internetka ee leh teknoolojiyada sirta, shabakadaha moobiilka iyo jilitaanka milatariga- waxay isku dayi doonaan inay qalabka taatikada ku beddelaan kuwa cusub oo leh xasaanad ka wanaagsan adduunka dhabta ah.
Oo halkan warku wuxuu ku dhammaanayaa. Mahad badan FreeSoftwareV wixii macluumaad ah.
Waad ogtahay saaxiibo, Software Bilaash ah meelkasta ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ciidanka Badda ee Mareykanka ayaa isticmaali doona Linux
Wanaagsan !!! hada gringos waxay u isticmaali doonaan GNU / Linux inay ku dilaan dadka aduunka oo dhan !!! aan wada xusno !!! ¬¬
Qofna ma dabaaldego, kaliya way ku dhawaaqaan
Waxaan cadeynayaa in faalladayda aysan dhihi jirin inay halkan ku xusayaan, dabcan, way tabinayaan, laakiin waa wax laga xumaado in adeegsigaan la siiyo software bilaash ah.
Xorriyadda 0 awgeed, adeegsiga milatariga ayaa lagu daray, ummadu waxay xaq u leedahay inay ku shaqeyso madax-bannaanideeda, waxa dadka ka careysiiya ayaa ah ogaanshaha sida Mareykanku ugu dhaqmo 'madax-bannaanideeda', waxay sidoo kale ku isticmaali doonaan drones 1] inay keenaan Koonfurta Ameerika sidoo kale SL , iyo yaa garanaya inta walaalo iyo walaalo ah ee dhibane u noqon doona xadgudubyada gringos. Waa wax laga xumaado in la ogaado in xadgudubyadan  lagu samayn doono GNU / Linux 🙁
Waxaan muujinayay sida aan uga careysanahay siyaasada gringos. Farxad
1. Barnaamijka gaarka loo leeyahay looma isticmaalo urur muhiimad gaar ah leh.
2. Software badal ah ayaa loo isticmaali doonaa taa bedelkeeda.
3. Tani waxay kordhin kartaa tayada darawallada ama tirada dadka wax dhisa ee Linux.
4. Waxaad ka dhigi kartaa ururo kale ama dalal kale sharad SWL xarumahooda.
Muxuu Mareykanku ugu adeegsan doonaa ujeeddooyin dagaal? That Taasi miyaanay lamid ahayn wixii aad horeyba ugu qabatay Barnaamijyada Gaarka loo leeyahay?
laga bilaabo 4 illaa lambar 1, dib u noqosho aan dhammaad lahayn !!!
Hal-ku-dhigga Raytheon ma noqon doonaa wax la mid ah "Linux for war"?
Hadda waxay yiraahdaan Linux waa xun yahay maxaa yeelay militariga Mareykanka wuxuu u isticmaalaa xD xD
Haa, waxaa jiri doona qof sidaas dhaha. Laakiin barnaamijku ma xuma, ma noqon karo. Sharku wuxuu ku jiifsan karaa dadka iyo adeegsigooda barnaamijka. Xumaan waxaa lagu samayn karaa jilicsan. bilaash ama jilicsan. khaas ah
Software Bilaash ah, Linux ma fiicna mana xuma… waa kaliya software, waxa lagu sameeyo (haddii loo isticmaalo sida casriga casriga ah sida Android ama gantaal OS) waa wax kale.
Xorriyadda loo adeegsado waxay jirtaa, faahfaahinta "waxa loo adeegsanayo ama waxa loo isticmaalayo" waxay ku sii jirtaa qaybta damiirka qof kasta.
Hadda waxaan u adeegsaneynaa Linux si aan ugu dilno dad aan waxba galabsan dagaallada. Sidee fiican (ama halkii, ka xun), waxaan ku soconnaa wadada saxda ah ...
Anigu waxaan ahay isticmaale linux, laakiin waxaan u maleynayaa in ciidamada badda ay tahay inay horumariyaan barnaamijyadooda u gaarka ah hubkooda dagaalka. Haddii ay masiibo ka dhacdo mid ka mid ah maraakiibtan dagaal (Ilaahay ha xifdiyee), naso oo hubso in Linux lagu eedeyn doono. Marka aniga iima muuqato inay tahay war naga farxiya, ee waa wararka noogu yeeraya milicsiga ... Dad badan ma isticmaali doonaan wax software ah, ama wax soo saar ah oo dowladuhu u adeegsadaan inay ku dilaan dadka (iyo dadka aan waxba galabsan)
Haa Linux marka loo eego dadweynaha guud, MAYA Linux sida hub dagaal.
Jawaab Edward Ocando
Waxba ma qaban kartid, maxaa yeelay SL waa u bilaash qof walba. Dadka kaliya ee masuulka ka ah adeegsiga dagaal ee suurtogalka ah waa dadka, ma aha lambarro taxane ah oo aan lahayn awood go'aan-qaadasho.
Markuu qof ku dilo cunug aan waxba galabsan qoriga, qoriga soo saare miyuusan masuul ka ahayn isagana ..? mise waxay ka timid uun qofka wax tooganaya ..?
Dhamaanteen waxaan mas'uul ka nahay ficilkeena ama abuuritaankeena, sidaa darteed cawaaqibkeeda waxaa lagu arkaa jiilka saddexaad ama afraad.
Waan fahamsanahay mawqifkaaga laakiin tani waa arrin mugdi badani ku jiro. Kombiyuutarada miyaa loo sameeyay inay jabsadaan xisaabaadka bangiga, ma sameeyaan khiyaanooyin dhijitaal ah, iyo waxyaabo kale oo badan? Maya
Kombiyuutarada ma loo sameeyay inay xakameyso hubka, aalado, iyo qalab kale oo dagaal? Maya
Markaa ma eedeyn karno kuwa allifay ama kacdoon ka sameeyay kombiyuutarada, miyayna ahayn? Muhiimadu waxay tahay haday hub tahay ama kumbuyuutar, waxaa badanaa lagu sameeyaa ujeedo (difaac iyo u shaqeynta kiiskan siday u kala horreeyaan), waana dhibaato bini aadamku isticmaalo aaladda.
Isku mid maahan, maxaa yeelay waxaad isbarbardhigeysaa ... Linux qoryo? O_O.
Better aan isbarbardhigno Linux iyo jikada ama mindi guriga.
Waan qaadan karaa mindida oo waxaan ka goyn karaa khudaarta guriga, taas oo ka dhigaysa qalab aad u wanaagsan, sidoo kale waxaan qaadan karaa Linux oo aan ku isticmaali karaa kumbuyuutarkayga, taas oo waliba Linux ka dhigaysa aalad aad u fiican.
Aniguba waan qaadan karaa mindida oo aan ku dili karaa qof wadada jooga, taasi miyay mindida wax xun ka dhigaysaa?
Waxay la mid tahay saaxiibkiis Linux.
Qoriga hubku wuxuu leeyahay hal ujeedo oo keliya, inuu wax yeelo iyo / ama inuu dilo ka soo horjeedka, halka aaladda guud ee ujeeddada ah (sida Linux iyo mindida) aysan ku dhicin isla kala soocid, mana wanaagsana mana xuma, ma fiicna ama xun noqon lahaa isticmaalaha iyo ujeedooyinkiisa.
Jawaab aad ufiican.
Dhinaca kale, runtii waa nasiib darro, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in tikniyoolajiyadda inta badan laga faa’iideysto cilmi baaris lagu sameeyay ujeeddooyin dagaal, tani waa laga yaabaa inay tahay kiiska tan iyo inta uu qofku jiro. Tusaale dhawaanahan la soo qaatay wuxuu noqon lahaa arpanet, in kasta oo ay abuurtay hay'ad difaaca Mareykanku, haddana ficil ahaan aasaas ayey u ahayd horumarka dambe ee internetka.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, warka ayaa runtii xoojinaya mowqifka khabiiro badan oo sheeganaya in amaanka iyo xasiloonida Linux kaliya aysan sababin saamigeeda suuqa hoose.
Tusaalaha kale ee caadiga ahi waa si fudud: INTERNET.
Internetku wuxuu ku dhashay Mareykanka, mashruuc militari ahaan, ka dibna wax badan buu ku kordhay, koobiyey jaamacado, iyo iwm iwm ... illaa maantadan la joogo.
Kuma raacsani mawqifkaaga gabi ahaanba, hadii aan aqbalo in dadku masuul ka yihiin falalkooda, laakiin iyagu mas'uul kama aha abuuristooda. Ma Marie Curie ayaa mas'uul ka ah horumarinta bambooyinka nukliyeerka ka dib markay ogaatay shucaaca? Qalabka shucaaca ayaa sidoo kale loo sameeyay daawo ama abuuritaanka dhirta kuleylka leh. Midna mas'uul kama aha abuuritaankiisa, laakiin isticmaalkiisa.
Intaa waxaa sii dheer, kumbuyuutarradii ugu horreeyay waxaa loo sameeyay in lagu jebiyo koodhadhka WWII, haddii kale iyagu ma horumari lahaayeen sida ay maanta yihiin. Xitaa internetku wuxuu bilaabay isticmaalkiisa militariga.
Taasi maahan wax qofna xamili karo, anigu ma doorto nidaamkeyga maxaa yeelay wuu istcimaalaa ama ma isticmaalo qof. Dhibaatadu waxay ku jirtaa fikirka noocaas ah ee xaddidan oo u maleynaya inuu xumaan karo ama in Linux lagu eedeyn doono; Cidna kuma eedeyn karto hirgelinta nidaam kasta, si fudud maxaa yeelay waxyaabaha sida gaarka ah u ah barnaamijka militariga waxa muhiimka ah waa hirgelinta, nidaamku wuu shaqeyn doonaa iyadoo ku xiran hadba sida ay u shaqeeyaan, iyo haddii madaxdu ay is rog-rogayaan, iska hubso inay noqon doonaan kuwa hirgaliyay nidaamka oo aysan noqon doonin kuwa Linus ama nidaamka sida.
Ilaah baan ku dhaartaye, faallooyinka nooca Hippie ee ah "hadda waxay isticmaali doonaan Linux si ay dadka u laayaan" wax macno ah ma samaynayso ... haa, aragti ahaan waxay u adeegsan doonaan Linux inay dadka ku laayaan, laakiin Linux looma qorsheynin waxaas oo kale, waxaa loo qorsheeyay in loo isticmaalo meel kasta oo aad rabto iyo nooca ay tahay waa inuu ahaadaa 100% dhexdhexaad, bilaash ...
Halkan NOBODY wuxuu u dabaaldegayaa in loo adeegsado ujeedada noocan ah, maxaa yeelay dhab ahaantii taasi waa wax foolxun, waxa la raadinayo waa in la ogeysiiyo ... geerida ha u sameeyaan waxa ay ka rabaan nidaamka, ha dhaleeceeyaan oo ha noqdaan kuwa ka soo horjeedda boqortooyooyinka, waxba kama beddeli doonto haba yaraatee. Xaqiiqdii, weyn kasta wuxuu ku hoos dhacayaa culeyskiisa
Meelaha oo dhan marka laga reebo istuudiyaha Disney !!
Jawaab si victorhck
Maxay horay u isticmaali jireen?
Sidoo kale, isweydaarsiga saamiyada adduunka oo dhan ayaa adeegsada Linux, kuwanna waxay sababeen in dad badani u dhintaan (gaajo, dabcan) marka loo eego diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yankees.
Dhanka kale, BSD qayb ahaan kamay soo saarin xoogagga Mareykanka? Waxaan xasuustaa inaan meel ku aqriyay laakiin hada ma helin.
Waxaan u maleynayaa inuu yahay go'aan ku saabsan wararkii ugu dambeeyay (sanadkii hore iyo tan maanta) ee basaasnimada iyo weerarada internetka ee inta badan laga helo Shiinaha iyo malaha ... waa wax dabiici ah inay rabaan inay "adkeeyaan" nidaamkooda kombiyuutarka iyagoo dooranaya OS unix-like ah.
Ma dhihi karaa waan faraxsanahay? Runtu ma ahan ... Waxaan jeclaan lahaa inaan sii wado isticmaalka adeegsiga Microsoft ....
Maxaa meesha ka maqnaa hehe, waxaan u maleynayaa in gnu-linux uu yahay hub "laakiin xorriyadda", dabcan waxay kuxirantahay sida aad nidaamka u isticmaasho ama sababta, qofka nidaamka wax yeeleeyaa waa kan ka dambeeya pc-ga.
Waxaan u maleynayaa in aysan macno lahayn halka laga isticmaalo Software-ka Bilaashka ah, illaa inta la adeegsanayo, waxaana qiyaasayaa in adeegsiga ay sameeyeen ciidanka SL ay noo keeni doonaan faa iidooyin heer sare ama ka yar, laga yaabee.
blah blah blah, waa intaan maqlo, softiweerka bilaashka ah waa midkaaga oo kale adigana, xorriyadduna waxay ku egtahay dhamaadka si loo adeegsado, hadaad rabto inaad disho dhallaanka Yuhuudda ah ee midabka leh, horay u soco, iyagu waxay daryeelayaan xaqa Hay'adaha si ay u ciqaabaan xasuuqan oo kale, ama haddii ay doonayaan inay u abuuraan nidaamyo gaar ah oo loogu talo galay dadka baraska qaba ee qaba cudurka AIDS-ka ee Afrika, sii soco XOR ayaad u tahay inaad sameyso waxa aad ku aragto softiweerka bilaashka ah ...
Ciidanka badda iyo xitaa aniga he .heheheejjee
Waa inay noqotaa dharbaaxo aad u adag kuwa sameeya barnaamijyada bilaashka ah iyo kuwa barnaamijyada sameeya si ay u arkaan Waxaan taas ugu shaqeeyaa kalgacal iyo dadaal badan sameeyey oo loo soo bandhigey dadweynaha, hadda waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dilo dadka rayidka ah ee adduunka oo dhan iyo in la burburiyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo hab-nololeedka bulshooyinka oo dhan. Laakiin mid ka mid ah afarta xorriyadood ee barnaamijka bilaashka ah ayaa si cad u sheegaya: Xorriyadda loo wado barnaamijka ujeeddo kasta ha noqotee ....
Cunsurka qaboojinta akhlaaqda waa in lagu tixgeliyaa xaalado kale, oo aan lagu tixgelin barnaamijka.
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, taasi waa waxa aan ula jeedo.
Tusaale ahaan, waqti dambe waxaan rabaa inaan xirmo u sameeyo Debian, ma qiyaasi kartaa in diyaaradahan ay wataan Debian? Waxaan ku dhamaan lahaa si aan habooneyn u caawinta Adeer Sam inuu dilo dadka aan waxba galabsan meelwalba, sax? Kiis aad u mala awaal ah oo cad. Kaliya waxay bixisaa caro badan
Waxaa weeye waxa aad dhahdo waa wax lagu qoslo, kuma caawin doontid wax dadka lagu dilo, si dadban iyo si toos ah toona. Marka ugu horeysa, maxaa yeelay ma isticmaali doonaan wax xirmo ah ama xitaa wax bakhaar ah.
Mid kale ayaa ah in adiga, ama aniga, ama inbadan oo banaanka joogta aynaan xirxirin doonin wax runtii caawiya ama daneeya dowlada gringo.
Saddexaad, isticmaal Debian? lol, waxay qaadan doonaan xudunta saafiga ah oo fudud oo halkaas ayay ka samayn doonaan waxay rabaan, kaalay, MA JIRO distoor awood u leh inuu wax sidan oo kale ah sameeyo; Runtii, waxay u baahan yihiin maahan nidaam desktop ah laakiin waa nidaam heer hoose ah (heer barnaamij ah) oo kula hadla mashiinno ku qoran luqado sir ah… maahan sida wax loo qoro Python ama C ++.
Ma aqaan ilaa iyo goorta ay sii wadi doonaan inay ka nixiyaan wax in kasta oo aysan fiicnayn ama qurux badnayn, ay dhici doonaan, ma iska ilaalin karno iyo ... haddii aan isku dayno inaan sameyno waxaan noqonaynaa labawejiileyaal maxaa yeelay way ku caddahay falsafadda furitaanka iyo barnaamijyada bilaashka ah: Xorriyadda loo wado barnaamijka ujeeddo kasta ha noqotee.
Adigu ma aadan fahmin doodda, isla sidaas ayaa ku dhacda kuwa soo saara kumbuyuutarrada Linux, ma waxaad u malaynaysaa in Alan Cox uu ka fikiray adeegyadan markii uu si firfircoon uga qayb qaatay kernel-ka Linux?
Taasi waa sababta uu u yiri waa kiis mala-awaal ah. Aniguna waxaan ku celinayaa: Waxaan muujinayay khilaafkayga siyaasada arimaha dibada ee dawlada Maraykanka. Waan ku raacsanahay dooda ah in waxa xun uu yahay isticmaalka la siinayo softiweerka ... Laakiin maadaama aysan ii ansixin faaladayda kale: - /
Ma aqaano waxaad horey u tiri, ama waxay hada ku saabsan tahay, laakiin waad hubi kartaa wax, faallooyinkaaga haddii aan la ansixin ama aan la ansixin, waa sababta oo ah ma jiro maamul waqti u qabtay inuu sameeyo .. 😉
Lama ansixin? Hadda waxaan calaamadeeyaa sanduuqyada faallooyinka, ma aqbali karno faallooyinka saaxiib 😉
PS: Filimka Akismet horay ayuu ii dhibay enough_¬
Ma ahayn shaandhada, taasi waa, haa, laakiin sabab macquul ah, maxaa yeelay faallooyinka waxay lahaayeen xiriiro dhowr ah waadna ogtahay inay taasi noqon karto SPAM.
Haye qeybta ay ku qoran tahay:
«Dhibaatooyin ka dib saldhigyadeeda kontoroolka, Ciidanka Badda ayaa go'aansaday, shaqaalaynta Raytheon, inay beddelaan nidaamyadooda xakamaynta qalabka anteenada sida diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay bilaabeen. Xulashadaadu waa inaad u guurto Linux »
Eeg cabirka font ... Sidan waa sida ay noqon laheyd faallooyinka iyo xitaa Boostada lafteeda
Waan ku dhibtooday akhriska markii aan bilaabay inaan akhriyo padacito-ka cabirka xarfaha ufffff ayay indhahaygu qaboojiyeen .. Fadlan wax walba oo sidaas ah ku dheji cabbirkaas ont
Hagaag, hadaanan khaldamin, farqiga udhaxeeya ma ahan cabirka farta, laakiin waa qaabkiisa. Sikastaba, biraawsarayaasha qaarkood (sida Firefox) waxay taageeraan iskuxirka furaha kontoroolka oo leh kudar iyo laga jaro furayaasha nambar si loo badalo cabirka farta, ma xasuusto hadii ay ku shaqeyso Chrome (mudo badan ma aanan isticmaalin), isku day inaad eeg.
Hagaag, ma arko sababta dhibaatada aadka u badan ee GNU / Linux ay u isticmaasho machadkan ama hay'adaas ama qofkaas ... taasi waa waxa ay ku saabsan tahay, hada, sida ay sifiican ugu tilmaameen faallooyinka qaarkood ee kor ku xusan: -Qofkasta ayaa mas'uul ka ah isticmaalka la siiyay- oo aan ahayn sidaas darteed nidaamka qalliinka ee laga hadlayo ayaa mas'uul ka ah.
Runtu waxay tahay in go'aamada noocan ahi aysan iiga yaabin ... xoog iyo muuqaalada ay leeyihiin GNU / Linux oo ay soo bandhigaan marka lagu daro "qiimaheeda" waa mid sifiican loo wada garanayo dhamaanteen. lacag la'aan ah oo lagu kalsoonaan karo.
Tani waa sida Yanksku yihiin, markaa waxay dhihi doonaan la'aantood Linux waxba ma ahaateen oo waxaan ku leennahay nolosheena iyo xorriyaddeenna.
Hehehe, ilaa xad macquul ah.
Hagaag kernel-ka Linux waxaa soo saaray inta badan shirkadda Ret Hat .. oo ah shirkad ay dowladdu leedahay
Saxitaanka, Red-Hat ayaa wax ku darsada, laakiin shaqada dhabta ah waxaa sameeya ilaa 20 qof oo ka kala socda hay'ado kala duwan oo ay weheliso Linus Torvalds. Sikastaba waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la baaro.
Aniga ahaan waa istiraatiijiyad dowladeed in GNU / Linux laga dhigo mid xun iyadoo la adeegsanayo barnaamijka militariga. Laakiin way ka shaqeyn doontaa iyaga, maxaa yeelay GNU / Linux maahan oo kaliya OS, waa hab caqli badan oo wadashaqeyn badan oo nolosha ah. Marka GNU / Linux waxay ku dambayn doonaan inay beddelaan dhaqanka ciidanka…. Sababtoo ah waxaa jira wax la yiraahdo dabeecadda cidda, taasna isma beddeleyso, waxaan isticmaalay GNU / Linux illaa iyo markii aan 11 jir ahaa (tan iyo markii aan haysto CPU), haddana waxaan ahay 29 jir, waana la ixtiraami karaa aniga inaan noqdo mid taageero iyo mid aqooneed leh, taas oo ah, inaan ku fiicnaado wax walba iyo ka sokow inaan ahay qof aad u fiican, taasina waa dhaxalka GNU + Linux ... Maanta waxaan ahay macallin, ardayda Linux-na dhammaantoodna waa caqli, karti iyo taageero ... Taasi waa, arday aad u fiican iyo dad aad u fiican.
Waa wax lagu qoslo maxaa yeelay ardaydaydu markay i arkeen, waxay bilaabeen inay adeegsadaan Linux si ay wax uga ogaadaan in ka badan ardayda kale, taas oo ah, inay "ka sii badan yihiin" ardayda ay isku fasalka yihiin, ka dibna waxay ku dambeeyaan inay noqdaan dad ka wanaagsan, kaliyana lama wadaagaan ardayda ay isku fasalka yihiin, laakiin caqli ahaan.
Taasina waa dabeecadda GNU / Linux: inaad noqotid taageero, karti iyo dad wanaagsan.
Ku jawaab Mauri Linux
MPD: Jinni badan oo muusig ah.
Pithos: macmiil u dhashay Pandora oo u shaqeeya GNOME